UJamie Bell ujoyina uWagner Moura kolu thotho "Shining Girls" | Ndisuka mac
UJamie Bell ujoyina uWagner Moura kuthotho oluthi "Shining Girls"
Inkqubo entsha ye-Apple TV + ethi "Shining Girls," esekwe kwinoveli kaLauren Beukes, izakubonisa umdlali wegama elitsha ojoyina u-Elisabeth Moss okhoyo kunye UWagner moura. UMoss uza kudlala intatheli (uKirby) ohlaselwa kabuhlungu. UMoura uzakudlala uDan, intatheli egubungela uhlaselo, kwaye uBell uzakuthatha indima kaHarper, isizungu esingaqondakaliyo esidibanisa uKirby.
"Amantombazana akhanyayo" athathwa njenge ixesha lokuhamba elonwabisayo esekwe Inoveli enegama elifanayo ngumbhali uLauren Beukes. Ibali lijikeleza indoda engenamakhaya ukusukela kwixesha loxinzelelo lwaseChicago efumana isitshixo sendlu evulwe ngamaxesha ahlukeneyo kwimbali yeso sixeko saseMntla Melika. Nangona kunjalo, ukuhamba nge-portal, kuya kufuneka ubulale abafazi abahlukeneyo.
IChicago, 1992. Bathi into engakubulali ikwenza womelele. Xelela uKirby Mazrachi, obomi bakhe bujikile emva kokuba azame ngenkohlakalo ukubulala Njengokuba esokola ukufumana umhlaseli wakhe, iqabane lakhe kuphela nguDan, owayeyintatheli yokubulala owayephethe eli tyala kwaye ozama ukumkhusela ekuthatheni kwakhe. Njengoko uKirby eqhubeka nophando ufumanisa amanye amantombazana abuleweyo. Ubungqina bolwaphulo mthetho… abunakwenzeka. Kodwa kwintombazana ekufanele ukuba ifile, akunakwenzeka oko akuthethi ukuba ayenzekanga ...
"Ukuqaqamba Amantombazana" kukubheja kuka-Apple Ngokudibana ne-MRC Television. Okwangoku asinawo umhla wokukhutshwa okanye ukuqala kwemveliso. Kodwa le nto ibonakala ngathi sele ithathe i-inertia kwaye ayikhangeleki ime kunye Ukudityaniswa kukaJamie Bell. Ophumelele iBhaso le-BAFTA owaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe kwi "Rocketman" okanye "uBilly Elliot" uza kudlala indawo kaHarper.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » UJamie Bell ujoyina uWagner Moura kuthotho oluthi "Shining Girls"